प्रधानमन्त्रीज्यू, थकित र अनुत्तरदायी अनुहारबाट घेरिने कि ऊर्जावान् टिम बनाउने ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
प्रधानमन्त्रीज्यू, थकित र अनुत्तरदायी अनुहारबाट घेरिने कि ऊर्जावान् टिम बनाउने ?
२०७७ कार्तिक १२, बुधबार ०५:००:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न पार्टीको दबाबका कारण तनावमा छन् । उनी खाली रहेका मन्त्रालयमा मात्र आफ्ना वफादार पात्रहरुलाई ल्याएर पदपूर्ति गर्न चाहन्छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पूरै सेट नै फेर्ने अडानमा छन् ।
तर, यी कुनै पनि नेताको प्राथमिकतामा युवा, ऊर्जावान् र राजनीतिक भविष्य भएका नेता छैनन् । उनीहरु सबैजसो गुनासाका पोका बोकेर बसेका उनै बासी अनुहारहरुलाई सत्तामा दोहोर्याउन चाहन्छन् । अब फेरि पालो आउला नआउला, अहिले नै हो मौका भनेर बसेकाहरुको चित्त बुझाउनेतिर मात्र उनीहरुको ध्याउन्न छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुपर्ने हो, यो समय इतिहासको ब्याज खाएर बस्ने बेला होइन । यो त काम देखाउने बेला हो । अब उनीसँग धेरै समय पनि छैन । चौतर्फी अनुकूलताका बाबजुद यो सरकारले आफ्नो अढाई वर्षमा देखाउनलायक काम केही गर्न सकेको छैन । अबको एक–डेढ वर्षमा पनि कुनै नतिजा देखाउन नसकेमा आगामी चुनावमा त पत्तासाफ हुने नै छ, इतिहासले पनि धिक्कार्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै आफ्नो कार्यकाललाई इतिहासमा स्मरणीय बनाउन चाहन्छन् भने यसपालि आफ्नो टिममा युवा राजनीतिक नेतालाई भित्र्याउनुपर्छ । अरु नेताको लहैलहैमा लागेर स्थायी समिति सदस्य भएको वा सचिवालयका सबैलाई भित्र्याउनेजस्ता लहडी र तर्कहीन मापदण्ड बनाउनु हुँदैन ।
युवाहरुमा पनि अलि जोसजाँगर भएको, राज्यका किलाकाँटा बुझेको र राजनीतिक भविष्य पनि भएकोलाई छान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो विश्वासपात्रबाट पर जान चाहन्नन् भने पनि महेश बस्नेतलाई एकपटक राम्रो मन्त्रालय दिएर हेर्दा हुन्छ । यसअघि उद्योगमन्त्री हुँदा पनि महेशले केही पहलकदमीका साथ पाइला चालेकै हुन् । त्यस्तै शेर वहादुर तामाङ, प्रेम आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, खिमलाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, राजेन्द्र राई जस्ता युवा अनुहारलाई पनि उनले भूमिका दिनुपर्छ । अर्थ र गृहमा परिपक्व नेतृत्व आवश्यक पर्ने भएकाले सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मालाई ल्याउन सक्नुपर्छ ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा योगेश भट्टराईले अहिलेसम्म युवाप्रतिको अपेक्षामा निराशा भर्न दिएका छैनन् । काठमाडौँ विमानस्थलको कायापलट गर्न, निजगढ र भैरहवा विमानस्थलको कामलाई गति दिन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न उनी लागिपरेकै छन् । प्रतिकूल अवस्थामा पनि योगेशले आफ्नो उपस्थिति र भूमिका कमजोर हुन दिएका छैनन् । उनले यो गर्नुपर्ने बाध्यता पनि किन छ भने उनी राजनीतिको युवा पुस्ताका आशाका प्रतीक हुन् । उनी भुत्ते सावित हुँदा सिंगो पुस्ताप्रति नै निराशा पैदा हुन सक्छ । उनको राजनीतिक भविष्य छ । उनी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । त्यसकारण उनी जनउत्तरदायी पनि बन्नुपर्छ । उनले संगठनबाट चुनाव जित्नुपर्छ । त्यसैले पार्टीको साख र भविष्य हेरेर पनि उनी चल्नुपर्छ ।
यी बाध्यताहरु युवराज खतिवडा, विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, लालशंकर घिमिरे, सूर्य थापाहरुलाई हुँदैन । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको साखको पनि चिन्ता छैन । पार्टीको भविष्यको पनि मतलब हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका अगाडि सत्य कुरा बोल्न डराउने, गुलिया कुरा कानमा भरेर भ्रममा पार्ने, आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि पार्टी र प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्नेमै यिनले आफ्नो भविष्य देखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेकामध्ये राजन भट्टराई जनताबाट हराइएका हुन् भने अरु जनताप्रति उत्तरदायी नै नभएका पात्र हुन् । त्यसैले उनीहरु कुनै राजनीतिक प्राणी पनि होइनन् । नेतृत्वको भजनकीर्तन गरेर, आलोचकलाई आक्रमण गरेर र जनतालाई हियाएर आफ्नो भूमिका देखाउनेहरु शासकको वरिपरि बसेपछि विनाशको श्रीगणेश त्यहीँबाट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताबाट अनुमोदन नभएकाहरुलाई आफ्नो टिमबाट हटाउन सक्नुपर्छ । अनि वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता जनतबाट दण्डित भएका पात्रलाई नभित्र्याउन पनि उनलाई नैतिक बल प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि उनले मन्त्रिपरिषदमा ताजा, ऊर्वावान् युवा नेताहरुलाई स्थान दिन सक्नेछन् । त्यसपछि मात्र मुलुकमा केही सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । उनै बूढा, पुराना, थकित, गलित, पटकपटक परीक्षित र असफल अनुहारहरुलाई नै पालैशान्ति सिंहदरबार भित्र्याएमा न देशले नतिजा पाउनेछ । न जनताले सेवा र सुविधा महसूस गर्नेछन् । पार्टी र स्वयं प्रधानमन्त्रीको साख झनै गिर्नेछ ।